Venezoela: Mianatra mitendry Gitara ao amin’ny tranokala 2.0 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Marsa 2011 4:45 GMT
Vakio amin'ny teny English, srpski, বাংলা, Español
Sarina gitara tamin-ny mpampiasa Flickr LCoronelP (CC BY-NC-ND 2.0)
Ny gitara no sary masina lehibe amin'ny mozika nenti-paharazana Venezoelana. Tamin'ny voalohany no nianarana azy matetika ary miaraka amin'ny ankamaroan'ny hira mitantara ny hira vako-drazan'ny firenena. Mety amin'ireo bàn-kira isan-karazany ny gitara, miaraka amin'ny ampongamaroanaka avy any amorotsiraka, ny mozika calypso avy any atsimo. Matetika mampiasa gitara ny amboaram-peo nentim-paharazana, manao ny hirany amin'io zavamaneno io koa ny antoko-mpihira. Nipaka tany amin'ny fampahalalam-baovao an'olo-tsotra amin'ny aterineto ihany koa ny gitara: naparitaka tao ny gadon-kira joropo sy gaita, ary ny tantarany, ny mpanao mozika fa kosa ahoana no fampiasana ny zava-meno, izay no niadin-kevitra ngezabe tao?.
Ny bilaogy Recreateoficial [es] nitantara sombiny amin'ny tantara:
Efa lavitra dia lavitra ny fiaviany. misy zavamaneno mitovitovy aminy avy any Iran sy Crete amin'ny endrika bikan'atody sy efajoro (…) Tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-16, nandritra ny firohotry ny arabo no tonga tao Espaina ny karazana kabosy manana tady efatra na fanosehana avy any amin'ny Arabo. Eto no vaovao, noforonina ny endrika tsy dia manome boribory lavalava loatra, mitovitovy endrika kokoa amin'ny “gitara manana tady valo” (…) Nandalo tany amin'ny nosy Canary ny kabosy, mandra-panova azy ho lasa “timple”. Tokony naondrana any Amerika sy ny Karaiba niaraka tamin'ny fanjakaakan'i Amerika ny “timple”, efa an-taonany maromaro taty aoriana vao fantatra ny endriny maro ahitana azy manerana an'i Amerika Atsimo. Nitovy be tamin'ny razambeny taloha kosa ny Cuatro [kabosy] portorikana.
Ny bilaogy micuatro.com [es] sy tucuatro.com [es] nizara ny tendry sy hira misy naoty, fanarahambolontany ary ny ohatra isan-karazany.
Misy toerana ho an'ireo mpankafy azy ao amin'nyYouTube, noho ny fisian'ireo kaoontin-dahatsary ho an'ireo mpitia CuatroCriollo [es], izay mandahatra ireo hafatra ka manamora ny fianarana amin'ny voalohany:
Tahaka ity mampiasa gitara ity, maro koa ireo hafa no mizara izay efa nianarany. Manoratra fotsiny hoe “Venezoelan cuatro” amin'ny fikarohana, tsy mana-pahataperana ny valiny azo. Misy fahafahana malalaka ahitana ireo karazana mozika tadiavina. Ny gitara, no tena malaza amin'ireo fampisehoana betsaka tsy ho amin'ny fialam-boly ihany fa mba hianarana bebe kokoa momba ny zavakanto.